Iyini inkampani enomkhawulo yezikweletu? | Ezezimali Zomnotho
Iyini inkampani enomkhawulo yezikweletu?
USusana Maria Urbano Mateos | | Inqubomgomo yezimali
Yaziwa nangokuthi "I-SRL" futhi eyaziwa kakhulu njenge- "SL" noma i-Limited Company. Ingenye yezinhlobo zezinkampani ngaphakathi komkhakha wezohwebo, isetshenziswa kabanzi eSpain ngosomabhizinisi abazisebenzayo kanye "nosomabhizinisi" abazibiza bona.
Lokhu nakho kuvumela amalungu alokhu uhlobo lwenkampani, nciphisa isikweletu sakho enhlokodolobha enikelwe enkampanini. Ngakho-ke, le kuyindlela ephumelelayo yokuvikela izimpahla zakho, njengengxenye yengozi engenzeka yezikweletu zebhizinisi nomphakathi okukhulunywa ngawo.
1 Iyini inkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelwe?
2 Izici zenkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelwe
2.1 Ezinye zezici ezicacisiwe zenkampani enesikweletu esinqunyelwe kuphela
2.2 Ezinye izici zengezwe ku-SL
3 Iyini inkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelwe?
3.1 Umehluko inkampani enesikweletu somuntu oyedwa enomkhawulo "i-SRLU" enayo nenkampani yesikweletu esilinganiselwe i- "SRL"
3.2 Amathiphu amaningi nge-SL noma kulabo abazisebenzayo
Iyini inkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelwe?
Uma kukhulunywa ngezinketho zenkampani, yi- inkampani enesikweletu esinqunyelwe kuphela. Enye ye iningi elikhethwe ngosomabhizinisi ukuthi ezinyathelweni zabo zokuqala emakethe bakhetha ukubhalisa abazisebenzelayo bese bekwazi ukuzisebenzela.
Este uhlobo lwenkampani Kukhethwa labo somabhizinisi abafisa ukuba ngusomabhizinisi ngamunye futhi ngokufanayo bangene kwezebhizinisi nezimboni ngesikweletu esilinganiselwe abaqinisekisa ngaso impahla yabo.
Unganikezwa amacala amabili ahlukene wezinkampani ezinesikweletu esinqunyelwe kuphela
Enye yazo yakhiwe umlingani ohlukile, Sengivele ngiyazi ukuthi lo uzakwethu kuphela ungumuntu osemthethweni noma wemvelo.
Icala lesibili elihlukanisayo lenkampani enesikweletu esinqunyelwe yedwa liqukethe i- umphakathi owakhiwe ngabalingani ababili noma ngaphezulu. Lokhu kuhlinzekele ukuthi wonke amayunithi adlulisiwe futhi aba impahla yomlingani oyedwa.
Izici zenkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelwe
Noma ngabe zikhona izinhlobo eziningi zezinkampani zezohwebo umuntu angaqala ngayo ukwakha ibhizinisi lakhe.
Yinkampani eyedwa enesikweletu esilinganiselwe, okuyi inikeza izinzuzo ezikhethekile nezinzuzo ohlobo oluzisebenzelayo nolwehlukile losomabhizinisi.
Le nkampani yokuhweba kubonakala kakhulu ngokuba nomlingani oyedwa, ukuba yilowo mlingani onamandla okuphatha ngaphakathi enkampanini yokuphatha noma yokudlulisela ukuphatha eqenjini labantu noma komunye umuntu.
Esinye isici esibalulekile salolu hlobo lomphakathi we isikweletu esilinganiselwe sobunikazi, lokho kufana neminye imiphakathi. I- imali enikelwe inqunyelwe njengezikweletu zabo kuphela nezikweletu zomphakathi, kepha emphakathini ka-rumthwalo olinganiselwe wedwa, isitoko sezimali sihlukaniswe saba izingxenye ezilinganayo nezingenakuhlukaniswa.
Ezinye zezici ezicacisiwe zenkampani enesikweletu esinqunyelwe kuphela
Umthethosisekelo netayitela lenkampani kumele linqume inhlangano ngqo yokuphatha. Ukuguqulwa kuphela uma izimiso zihlinzeka ngezinguquko ezinjalo.
Ukuze usethe inkampani enomthwalo wemfanelo enomkhawulo womuntu oyedwa, udinga ubuncane bomuntu ongu-1 wemvelo. Ukuba ngabantu abaningi abafakiwe, inkampani kufanele ibe nesikweletu esilinganiselwe noma i-LLC.
Kumelwe kube bhalisa futhi urekhode ngokubhala kwiRegistant Registry, noma yiluphi ushintsho kumlingani oyedwa, kanye noshintsho kubunikazi benkampani enesikweletu esilinganiselwe.
Kumelwe bhalisa ku-Mercantile Registry, leyo nkampani enomuntu oyedwa enomkhawulo wesikweletu nayo eyenziwe ngetayitela lomphakathi futhi ezoqukatha imithetho yenkampani.
Kuzokwenzeka thumela kungakapheli isikhathi esiyizinyanga ezimbili kwi-Mercantile Registry itayitela lokufakwa kwenkampani ye-mercantile, isikhathi esifanayo esiqala ukubala kusukela osukwini okunikezwe ngalo izindatshana zenkampani. Ukuba ngabasunguli nabaphathi labo abazophendula ngokuhlanganyela nangokuhlukanisene nephutha, ukulimala kanye nokubandlululwa abakubangelayo ngenxa yokwephula isibopho sokubhaliswa kuRegistant Registry.
Ezinye izici zengezwe ku-SL
Uma kwenzeka kunesidingo sokubhalisa njengenkampani enamalungu alinganiselwe enesikweletu ezinyangeni eziyisithupha ngaphambi kweRegistile Registry, uzakwethu uzophendula ngokungenamkhawulo futhi ngokuhlanganyela ezikweletini zenhlalo esinenkontileka, ngalesi sikhathi lapho inkampani idlule ngaphandle kokubhaliswa kwiMercantile Registry.
La umphakathi ungaqala imisebenzi yokuhweba ngosuku lokunikezwa kwama-athikili wokufakwa, hhayi ngaphambili.
Ngaphandle kokuthi kunikezwe ngenye indlela ezimisweni, ukuphela kwenkampani enesikweletu esinqunyelwe ukuthi ibe nesabelo kuzoba nesikhathi esingapheli.
Ukuba Ama-3.000 ama-Euro imali yokuqala encane ukusungula inkampani enomthwalo wemfanelo enomkhawulo womuntu oyedwa. Inhlokodolobha izokwehlukaniswa yaba izingxenye ezilinganayo nezingenakuhlukaniswa, ezingenakuthathwa njengamasheya noma isihloko esingaxoxiswana. Imali enikelwe kwezenhlalakahle kumele ikhokhwe ngokuphelele ukuze iqhaza enkampanini lifakwe.
Ngaphakathi kokunikezwa kwemali yenhlalo kungaba unikeze ngamalungelo abalulekile noma izimpahla futhi lezi zizothathwa njengengxenye yesilinganiso sezomnotho.
Akuvumelekile ukubalwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo futhi akunasimo iminikelo yokwabelana ngemali eyinhloko, leyo misebenzi noma izinsizakalo.
Ngaphandle kokuthi kushiwo ngenye indlela noma kushiwo, konke umnikelo esitokisini sezimali kuzobhekwa ukuthi wenziwe ngesihloko sempahla.
Lezi zici zicacisa inketho kasomabhizinisi ofuna ukuqhuba ibhizinisi lakhe, abe ngumuntu webhizinisi. Kusetshenziswa inani elithile lezinto ezingumuntu futhi izidingo zalo zinganeliswa ngokwenziwa njengenkampani enesikweletu esilinganiselwe.
Mayelana ne umthethosisekelo wobunikazi obunikazi, izinzuzo, mhlawumbe eziyisisekelo, kufanele zicatshangelwe, njengokuthi kungaba lula kangakanani bhalisa ne-Mercantile Registry, njengosomabhizinisi ozisebenzayo ngokungafani nokufuna ukusungula inkampani enesikweletu esilinganiselwe.
Enye ingxenye ye-vIzinzuzo zokufaka njengenkampani eyedwa yesikweletu esinqunyelweukukhululeka lapho izikhungo zezezimali ezingasinikeza khona imali yokuqalisa ukusebenza kwale nkampani.
para setha inkampani eyedwa enesikweletu esilinganiselwe isitifiketi se- "Ihlelo lomphakathi" lokhu kukhishwe yiCentral Mercantile Registry.
Esho isitifiketi sisebenza noma sineshalofu impilo yezinyanga ezi-3, Ukuba yigama lapho lokhu kusebenza khona futhi kuqondwa ukuthi ngemuva kwalezi zinyanga ezi-3 ezifanayo isitifiketi singavuselelwa ukuthi sisebenze ezinye izinyanga ezintathu, kodwa-ke, akunconywa ukuvumela isitifiketi siphelelwe yisikhathi noma siphelelwe yisikhathi.
Kusuka kulesi sitifiketi esikhishwe yiCentral Mercantile Registry, ikhophi kufanele linamathiselwe lapho kugcwaliswa i-DUE.
Ngemuva kwalokho umnikelo wezimali zenhlalo kumele wenziwe, noma ngabe iminikelo yemali noma engeyona eyemali.
Iminikelo yemali yilezo ezinani lazo eliyimali kuphela futhi okungumnikelo wemali wozakwethu ngamunye, esimweni sokuba umnikelo ongeyona imali, lokhu kungaba yilelo lempahla elinenani elichaziwe nelicacisiwe.
Endabeni eyodwa inkampani enesikweletu esinqunyelwe kuphela, Kufanele ukhokhe Intela Ekuguqulweni Kwezomthetho eMnyangweni Wezezimali futhi ucele ne-CIF, ngaphezu kwezinye izitifiketi.
Umehluko inkampani enesikweletu somuntu oyedwa enomkhawulo "i-SRLU" enayo nenkampani yesikweletu esilinganiselwe i- "SRL"
Ake siqale ngomehluko okhona phakathi komphakathi we i-sole proprietorship isikweletu esilinganiselwe "i-SLU" nesisebenzi esizimele.
Zombili zakhiwe ngokwehlukile futhi zikhokha intela ngokwehlukile. Khonamanjalo yena umsebenzi ozisebenzayo ukhokhiswa intela yentela yomuntu siqu noma "Intela Yomuntu siqu", okusho ukuthi ngesilinganiso sinezinga eliphansi le-19,5% - 47%.
Inkampani eyi-Sole-Shareholder Limited Liability Company "SLU", ekhokhiswa intela yenhlanganoNjengoba lezi ntela seziphansi vele kusuka ezinkampanini ezincane ezikhokha ngaphansi kuka-15% noma njengezinga eliphezulu ezinkampanini ezingama-25%, lokhu kuphela ngo-2016.
Ngaphakathi komehluko wokubalwa kwezimali, umehluko ofanayo wenkampani awunakuthinteka, ngokuba yisisebenzi esizimele esibhalisiwe esigcwalisa izibopho ezimbalwa kunenkampani, lokhu ngezizathu ezisobala.
Ngenkathi i Isisebenzi esizimele kumele sethule incwadi yama-akhawunti emele futhi ekhombisa ukungena nokuphuma kwemali, engahlukaniswa njengomsebenzi olula owenziwa ngumuntu oyedwa, ngakolunye uhlangothi, inkampani enesibopho somkhawulo womuntu oyedwa kumele ithwale izici zokubalwa kwemali njengazo zonke izinhlobo zezinkampani zezohwebo, okumele yethule ibhalansi ye-akhawunti ehambisana nohlelo lokubalwa kwemali jikelele.
Amathiphu amaningi nge-SL noma kulabo abazisebenzayo
Okubi lapha kwabazisebenzelayo ukuthi uyakwazi kangakanani ukwenza lesi sikhathi nokulawulwa kolwazi ukwenza izici zakhe zokubalwa kwezimali.
Ezinye ze izibopho zabasebenzi abazisebenzayo kanye nezinkampani zezohwebo Ehlukaniswe kahle futhi emele intshisekelo enkulu lapho kusungulwa inkampani, yimisebenzi yezikweletu ezingakhokhelwa noma ezingakhokhelwa yinkampani.
Ukuba yisisebenzi esizimele, izikweletu ziwela kuzimpahla eziqondene ngqo zomuntu embuzweni wokungakhokhi, ngenkathi, ekubeni inkampani enesikweletu esilinganiselwe, Uma kwenzeka kungalandelwa inkokhelo, izimpahla kuphela inkampani eyakhiwe ngazo ezingaba sengozini, izimpahla ezinjalo noma iminikelo enikezwa ngesikhathi sokuyifaka njengenkampani yezentengiso ngaphambi kweCentral Mercantile Regime.
Ngamafuphi umuntu ozisebenzayo usengozini yokulahlekelwa yimpahla yakhe nayo yonke into ephethwe yinkampani yezentengiselwano ebeka engcupheni yokulahlekelwa utshalomali olunikezwe istock capital.
Ngaphakathi kwe-vIzinzuzo nezinkinga ezingaba khona phakathi kokuba yisisebenzi esizimele noma inkampani enesikweletu esilinganiselwe, ngezinzuzo ezinikezwa yi-SME.
Kunconywa ukuthi uqale njengesisebenzi esizimele, ukuze uzuze uzinzo emakethe bese uphasa noma ufisa ukuba yinkampani yezentengiselwano efakiwe.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ipolitiki yezomnotho » Inqubomgomo yezimali » Iyini inkampani enomkhawulo yezikweletu?
Imali engenayo inzalo evela kumakhadi wesikweletu
Imakethe yamasheya: yini iBPA?